Maraoka: Voarara hoe ny Al Jazeera ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jolay 2008 17:57 GMT
Taorian’ny fifandonana teo amin’ny mpitandro filaminana sy ny mpanao fihetsiketsehana tao Sid Ifni , izay nisy naratra maro – ary angamba koa maty, dia namoaka fanambaràna ny Al Jazeera nandritry ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety, (nokarakarain’ny Foibe Marokana momba ny Zon’Olombelona), fa tsy an’asa maro nanao fihetsehana tamin’io andro io no maty. Ny manampahefana Marokana, sorena noho io tatitra io, dia nanameloka ny talen’ny Al Jazeera ao Rabat ho nanely vaovao tsy marina tamin’ny 13 jona. Vitsy ireo mpampita vaovao sy mpitoraka blaogy no namoaka azy ity. Tamin’izy ireny, mpitoraka blaogy iray monina any Maraoka , North Africa Notes, no nanoratra toy izao [amin’ny teny anglisy]:
Inoako fa mety ho olana iray goavana ankoatry ny fahafahana miteny fotsiny “milaza izay tiana” izy ity, ary toa ny fahafahàn’ny Marokana antonontonony mandrefy tsy mitanila ny fiainany andavanandro sy ny governemantany aza, sy manontany momba izay andraikiny.
Mazava ho azy fa ny Al Jazeera dia mpisolo vaika ny ankàlana mora raisina . Masoivohom-baovao iray hamaivanin-danja any amin’ireo firenena tsy tia ny hahalalàn’izao tontolo izao izay mitranga any aminy io.
Tsy faly i Christine Benlafqih ao amin’ny tranonkala Arabisto.com [amin’ny teny Anglisy]:
Angamba mety ho tsy dia mahatohina loatra izany rehetra izany afa-tsy ny hoe noraràn’ny governemanta Marokana ny Al Jazeera tamin’ny volana lasa mba tsy hahafahàn’izy ireo mandefa intsony ireo vaovao avy aty amin’ny firenena amin’ny faritra Maghreb. Herintaona mahery no naharetan’ny fanapariahana, ary ny fanazavàna manodidina ny fampiatoana azy ho noho ny olana “teknolojika sy lalàna” dia tsy nisy nihaino sy manjavozavo.
Tsy atao mahagaga raha tsy nisalasàla ny Reporters Sans Frontières niditra an-tsehatra tamin’ity tranga ity tamin’iny volana lasa iny. Angamba mbola hiditra an-tsehatra indray mandeha ry zareo.